Stanford မှအလကားသင်ကြားပေးမည့် Computer Networking အတန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Stanford မှအလကားသင်ကြားပေးမည့် Computer Networking အတန်း
Stanford မှအလကားသင်ကြားပေးမည့် Computer Networking အတန်း
Posted by သကြားလုံးကြော် on Oct 10, 2012 in Computers & Technology, Education, Know-How, DIY | 11 comments
တကမ္ဘာလုံးကကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် Stanford University က Introduction to Computer Networks အတန်းကို Free လွှင်ု့ပေးနေပါတယ်။ Stream လုပ်ရမှာမို့လို့ မြန်မာနိုင်ငံက ကိုးနတ်ရှင်မကောင်းရင်တော့ မတတ်နိုင်ပါ။ Download လုပ်ပြီး နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်လည်း ရပါတယ်။
October9ကအတန်းစပါတယ်။ December 2012 မှာပြီးပါမယ်။ တပတ် ၃နာရီစာလောက် Lecture video တွေကြည့်ရပါမယ်။ Credit မရပါ။ စာမေးပွဲဖြေစရာမလို။ (တိုက်တွန်းထားသော်လည်း) အိမ်စာလုပ်ရန်မလို။ Probability နဲ့ Bit တွေ Byte တွေသိရင်လုံလောက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဘာမှသုံးလို့မရလောက်တဲ့ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်လောက်တော့ပေးမယ်ပြောတာပဲ။
ဒေါ်လှ ၄၀၀၀ တန်ပုံမှန် Stanford အတန်းနှင့်တော့မတူပေမဲ့ မဆိုးဘူးထင်ပါတယ်။ ပညာရေး ဈေးအလွန်ကြီးနေတဲ့ခေတ်ထဲမှာ ရှားရှားပါးပါးအလကားရတဲ့ ပညာရေးလေး အကျိုးရှိရှိလိုချင်သူ (သို့) ပညာယှဉ်လိုစမ်းလိုသူ အင်ဂျင်နီယာ ကိုကိုမမတွေ စိတ်ဝင်စားရင် ကြည့်နိုင်အောင် သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို ဒီမှာဖတ်ပါ။ http://class.stanford.edu/networking/Fall2012/pages/overview
Free Sign up လုပ်ပြီး Video တွေကြည့်လို့ Download လုပ်လို့ရပါတယ်။
အဲလိုကျောင်းကြီးတွေက.. အလကားပေးတက်တဲ့သင်တန်း.. အပြည့်တက်ရင်.. အိမ်စာလုပ်ရင်.. ပိုက်ပိုက်ထောင်ချီပေးတာတွေတောင်ရှိတယ်..
စိတ်ကူးပေါက်သမို့.. CompTIA Security+ လေးယူမလားလို့..
အဲဒါ… အကျန်..အဲ.. အကြံလေးဘာလေး.. ပေးကြပါဦး..။
အလကား ဒေါင်းလို့ရတာလေးတွေရောပေါ့..။ :harr:
မီးက Computer Security ဆိုလို့ ညအိပ်ရင်အိမ်သော့ခတ်ရုံလောက်ပဲသိတာဆိုတော့ သဂျီးကိုအကျန်ရောအရှိရော မပေးနိုင်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ သင်တန်း Link တချို့ ရှိသေးတယ်။ ထပ်တင်ပေးမယ်။
ဖြစ်နိူင်ရင် ဒေါင်းလုပ်လေးလုပ်ပီး CD (or) DVD လေးနဲ့ဖြန့်ဝေပေးပါလား
အနော်တို့ ကိုးနတ်ရှင်က သိတဲ့အတိုင်းမို့….။
အကြံကောင်းပဲ။ တကယ် serious လိုချင်တာဆိုရင်တော့ နှစ်ကုန်တဲ့ထိ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။
ကွန်ပူတာနက်ဝပ်ကင်း က ကိုယ်နဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးနေသလားလို့။
ဒါ့ပုံ သင်တန်းကိုတော့ ပို စိတ်ဝင်စားတယ်။ကလိကြည့်ချင်တယ်။
နို့မို့ရင် လယ်ထွန်Zဖားက ကြွားသမျှအငေးသားကြည့်နေရတယ်။
Link လေးတွေပေးရင် ကျေးကျေးပါ။
ဒါ့ပုံတစ်ပုံကို ဘယ်လိုအထားအသို ထားရမယ် သင်လို့တတ်နိုင်တယ်
သို့တည်းမဟုတ် ဘယ်လို ဆက်တင်ချိန်မလဲ သင်လို့တတ်နိုင်ဦးမယ်.
အဲ့လာ က ဒါ့ပုံပညာလား ဆိုပြန်တော့လည်းမဟုတ်သေးပြန်ဘူးရယ်ဗျာ.
ဆိုင်းယန့်စ့်နဲ့ အာ့တ် ကိုပေါင်းစပ်ကြည့်တဲ့ အချိုးအစားမှာပဲ ရသပေါ်လွင်လာမယ်ထင်ပါရဲ့
အဲ့လာကြောင့်ပဲ ဈေးအကြီးဆုံးပစ္စည်း သုံးနိုင်သာဟာ ထိပ်ဆုံးအမြဲမရှိသလို
မှော်အောင်တဲ့ ဖိုတိုရှော့ပ်ဆြာတိုင်းလည်း ဘယ်တော့မဆို ဟိုက်လိုက် မဖြစ်ပြန်ဘူးလေ
အဲ့သည့်ဘက် ပြန်ဇောက်ချရေးဦးမယ် တွေးမိပါတယ်ဗျာ
ဓာတ်ပုံပညာက Art နဲ့ Science ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကို မသိတာ/မကျွမ်းတာထက် တစ်ခုခုကစရမှာပဲ။ ဘယ်ဟာပဲသင်လို့ရရ တိုးတက်ရေးအထောက်အကုပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ သင်လို့လေ့လာလို့ရသလောက်ကို လေ့လာပြီး သင်လို့မရတဲ့ art ပိုင်းကတော့ တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားရမှာပဲ။ ကျမတို့လို့ အနုပညာ Gene မပါတဲ့သူတွေကတော့ တတ်နိုင်တဲ့တစ်ဖက်ကပဲကြိုးစားလိုက်ရတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပန်းချီမဆွဲပဲ ဒါ့ပုံရိုက်တာ။
ဒါနဲ့ ဘယ်လို အန်ကယ်ဒုံဖြစ်သွားတာလဲ။